8 Ma Sọl kwadoro ogbugbu e gburu ya.+
N’ụbọchị ahụ, a malitere ịkpagbu+ ọgbakọ ahụ dị na Jeruselem; a chụsasịrị+ mmadụ niile n’ógbè ndị dị gburugburu Judia na Sameria, ma e wezụga ndịozi.
2 Ma ndị ikom na-asọpụrụ Chineke buuru Stivin gaa lie,+ ha kwakwaara ya ákwá arịrị dị ukwuu.+
3 Otú ọ dị, Sọl malitere imeso ọgbakọ ahụ n’ụzọ jọgburu onwe ya. Ọ na-awakwasị ụlọ niile n’otu n’otu, na-adọkpụpụta ma ndị ikom ma ndị inyom, ọ na-enyefekwa ha ka a tụba ha n’ụlọ mkpọrọ.+
4 Otú ọ dị, ndị ahụ a chụsasịrị gazuru ala ahụ na-ezisa ozi ọma banyere okwu Chineke.+
5 Filip, n’onwe ya, gbadara obodo Sameria+ ma malite ikwusara ha Kraịst.
6 Ìgwè mmadụ ahụ ji otu obi na-aṅa ntị n’ihe ndị Filip na-ekwu. Ha nọ na-ege ntị ma na-ekiri ihe ịrịba ama ndị ọ na-eme.
7 N’ihi na e nwere ọtụtụ ndị nwere mmụọ na-adịghị ọcha,+ mmụọ ndị a na-etikwa mkpu n’oké olu wee pụta. A gwọkwara ọtụtụ ndị ahụ́ ha kpọnwụrụ akpọnwụ+ na ndị ngwọrọ.
8 Oké ọṅụ wee dị n’obodo ahụ.+
9 Ma n’obodo ahụ, e nwere otu nwoke aha ya bụ Saịmọn, bụ́ onye nọ na-eme anwansi+ tupu oge a, na-emekwa ihe na-eju obodo Sameria anya, na-ekwu na ya onwe ya bụ nnukwu mmadụ.+
10 Ha niile, malite n’onye kasị nta ruo n’onye kasị ukwuu, na-aṅa ya ntị ma na-ekwu, sị: “Nwoke a bụ Ike Chineke, nke a pụrụ ịkpọ Ike Ukwu.”
11 N’ihi ya, ha na-aṅa ya ntị n’ihi na o ji ike anwansi ya mee ihe juru ha anya ruo oge dịtụ anya.
12 Ma mgbe ha kweere n’ihe Filip kwuru, bụ́ onye nọ na-ezisa ozi ọma alaeze Chineke+ na banyere aha Jizọs Kraịst, e mere ha baptizim, ma ndị ikom ma ndị inyom.+
13 Saịmọn ghọkwara onye kwere ekwe, mgbe e mesịkwara ya baptizim, ya na Filip+ na-anọ mgbe niile; o jukwara ya anya mgbe ọ hụrụ ihe ịrịba ama na-emenụ na oké ọrụ dị ike ndị a na-arụ.
14 Mgbe ndịozi nọ na Jeruselem nụrụ na Sameria anabatawo okwu Chineke,+ ha zigaara ha Pita na Jọn;
15 ndị a gakwara ma kpeere ha ekpere ka ha nata mmụọ nsọ.+
16 N’ihi na ọ ka-adakwasịghị onye ọ bụla n’ime ha, kama ọ bụ naanị na e mewo ha baptizim n’aha Onyenwe anyị Jizọs.+
17 Mgbe ahụ, ha bikwasịrị ha aka n’isi,+ ha wee malite ịnata mmụọ nsọ.
18 Ma mgbe Saịmọn hụrụ na a na-enye mmụọ nsọ mgbe ndịozi ahụ bikwasịrị mmadụ aka n’isi, o nyere ha ego,+
19 sị: “Nyekwanụ mụ onwe m ikike a, ka onye ọ bụla m ga-ebikwasị aka m n’isi wee nata mmụọ nsọ.”
20 Ma Pita sịrị ya: “Ka gị na ọlaọcha gị laa n’iyi, n’ihi na i chere na ị pụrụ iji ego nweta onyinye nke Chineke na-enye n’efu.+
21 I nweghị òkè ma ọ bụ ihe nketa n’ihe a, n’ihi na obi gị akwụghị ọtọ n’anya Chineke.+
22 Ya mere, chegharịa n’ihe ọjọọ a ị na-eme, rịọsiekwa Jehova arịrịọ ike,+ ka e wee gbaghara gị ihe ọjọọ obi gị na-echepụta, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume;
23 n’ihi na ahụrụ m na ị bụ akpa ilu nke na-egbu mmadụ,+ bụrụkwa agbụ ajọ omume.”+
24 Saịmọn zara, sị: “Rịọsierenụ+ m Jehova arịrịọ ike ka nke ọ bụla n’ime ihe unu kwuru wee ghara ịbịakwasị m.”
25 Ya mere, mgbe ha gbasịrị àmà nke ọma ma kwuo okwu Jehova, ha gaghachiri Jeruselem, ha wee na-ezisara ọtụtụ obodo nta nke ndị Sameria ozi ọma.+
26 Otú ọ dị, mmụọ ozi Jehova+ sịrị Filip: “Bilie gaa n’ebe ndịda n’okporo ụzọ nke si Jeruselem gaa Geza.” (Ọ bụ ụzọ dị n’ọzara.)
27 Ya mere, o biliri gaa, ma, lee! otu ọnaozi+ Itiopia,+ nke nwere ike dị ukwuu n’okpuru Kandesi bụ́ eze nwaanyị ndị Itiopia, onye na-elekọta akụ̀ ya niile. Ọ gara Jeruselem ife Chineke,+
28 ma ọ nọ na-alọta, nọrọkwa n’ụgbọ ịnyịnya ya ma na-agụpụta akwụkwọ Aịzaya onye amụma.+
29 Mmụọ nsọ wee sị+ Filip: “Garuo nso n’ụgbọ ịnyịnya a.”
30 Filip wee gbara ọsọ gaa n’akụkụ ya ma nụ ka ọ na-agụpụta akwụkwọ Aịzaya onye amụma, o wee sị: “Ị̀ maara n’ezie ihe ị na-agụ?”
31 O wee sị: “N’ezie, olee otú m ga-esi mara, ma ọ bụrụ na mmadụ eduzighị m?” O wee rịọsie Filip ike ka ọ rịgota ma soro ya nọdụ ala.
32 Ma akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke ọ na-agụpụta bụ nke a: “Dị ka atụrụ, a kpụtara ya n’ebe a ga-egbu ya, dịkwa ka nwa atụrụ na-adịghị ekwu okwu n’ihu onye na-akpacha ya ajị, otú ahụ ka ọ na-adịghị emepe ọnụ ya.+
33 N’oge e wedara ya ala, e wepụrụ ezi ikpe n’ebe ọ nọ.+ Ònye ga-akọ n’ụzọ zuru ezu banyere ọgbọ ya? N’ihi na e wepụwo ndụ ya n’ụwa.”+
34 Ọnaozi ahụ sịrị Filip: “Ana m arịọ gị, Ọ̀ bụ onye ka onye amụma a na-ekwu ihe a banyere ya? Ọ̀ bụ banyere onwe ya ka ọ̀ bụ banyere onye ọzọ?”
35 Filip meghere ọnụ ya,+ malite n’akụkụ Akwụkwọ Nsọ a,+ o zisaara ya ozi ọma banyere Jizọs.
36 Ma ka ha nọ na-aga n’okporo ụzọ ahụ, ha bịarutere n’otu mmiri, ọnaozi ahụ wee sị: “Lee! Mmiri; gịnị na-egbochi ime m baptizim?”+
38 Ya mere, o nyere iwu ka ụgbọ ịnyịnya ahụ kwụsị, ha abụọ banyekwara n’ime mmiri ahụ, ma Filip ma ọnaozi ahụ; o wee mee ya baptizim.
39 Mgbe ha si na mmiri ahụ pụta, mmụọ Jehova duuru Filip pụọ ngwa ngwa,+ ọnaozi ahụ ahụghịkwa ya ọzọ, n’ihi na ọ nọgidere na-agara onwe ya na-aṅụrị ọṅụ.
40 Ma a hụrụ na Filip nọ n’Ashdọd, ọ gazukwara ókèala ahụ ma nọgide na-ezisara+ obodo niile ozi ọma ruo mgbe ọ garuru Sesaria.+
^ Ọrụ 8:37*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D44%26Chapter%3D8%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl